Ahoana ny fomba hanontanianao bandy amin'ny lahatsoratra (+ lahatsoratra ohatra 12) - Fifandraisana
Ahoana ny fomba hanontanianao bandy amin'ny lahatsoratra (+ lahatsoratra ohatra 12)
Noho izany, nahazo mpitia ianao - ary manana ny isany - inona ny manaraka?
Ny fanontany bandy amina lahatsoratra dia mety hahatsapa ho somary somary saro-kenatra ihany, fa tsara ho an'izay somary saro-kenatra manontany manokana!
Manome anao ny fotoana hieritreretana tsara ny fomba tianao hamaritana azy io, ary manome azy ireo fotoana handinihana tsara ny tolotra omenao alohan'ny hamalian'izy ireo.
Raha manontany tena ianao hoe ahoana no anontaniako olona amin'ny alàlan'ny lahatsoratra, dia natambatra ity torolàlana mora ampiasaina ity - feno 12 santionany lahatsoratra azonao atao ny anao.
1. Manamaivana ao.
Na manontany tena ianao amin'ny farany fa ny lehilahy efa nitia anao hatramin'ny ela na mandefa olona mandefa sambany ianao dia milalaova milay!
Ampiasao amin'ny resaka mahafinaritra ianao ary manaova banter malefaka kely alohan'ny hametrahanao ilay fanontaniana lehibe.
Raha mahafantatra olona tsara ianao na nanantona fotoana vitsy, dia manome fotoana anao hamerenana amin'ny laoniny ny fahombiazanao amin'ny tena fiainana izany.
Azonao atao ny miresaka momba ny fotoana nahitanao azy ireo farany na momba ny namana itovizanao, ohatra.
Raha ity no fanombohana izay ho antenaina ho tantaram-pitiavana mahafinaritra, mifankahalala amin'ny alàlan'ny lahatsoratra kely alohan'ny handefasanao ny tenanao.
Mazava ho azy fa misy olona te-hitady azy eo noho eo, saingy, ny mety hitranga, raha manontany olona amin'ny alàlan'ny fandefasana hafatra ianao dia mety ho somary saro-kenatra ianao ary maniry ny handray azy miadana.
2. Mifanerasera am-pitiavana sy milalao ary mahafinaritra.
Miaraha mifalifaly amin'izany - ny fahafantarana olona tianao izany no tsara indrindra momba ny mampiaraka!
Aza matahotra ny ho somary adaladala na maneso manambola emoji maromaro ao ary milalao.
Ianao manontany azy ireo amin'ny daty, rahateo, ary te hanao ilay fanasana ho toy ny mampientam-po toy ny daty ihany.
Raha manana lahatsoratra mankaleo mangataka anao hivoaka ianao dia mety tsy ho faly amin'izany ianao. Lahatsoratra mahafinaritra sy malefaka anefa? Hiteny eny ao am-po ianao fa eny!
Asehoy azy ireo ny lafiny sariaka sy adala amin'ny toetranao ary ho dodona izy ireo hihaona sy hahafantatra anao bebe kokoa.
Ataovy tsara sy mangatsiatsiaka ny zava-drehetra - andramo ny tsy hampihoatra anao, na dia tena tafiditra ao aminy aza ianao!
Tsy milaza izahay fa mila manova ny tenanao mihitsy ianao fa mendrika ny mitandrina kely fotsiny momba izay ambaranao amin'izy ireo mialoha.
Miezaha tsy hanao tsindry mafy amin'izy ireo satria mety ho sendra mila sahirana izy ity.
3. Soraty ny tombotsoany.
Omeo toerana izy ireo handefasan'izy ireo SMS ary hamaly amin'ny fotoany avy!
Raha vao mihaona amin'izy ireo ianao ary samy mahalala raha te-hitondra zavatra lavitra, azonao atao ve ny manomboka mamorona andrasana manodidina ny faharetan'ny fotoana hamaliany anao sns.
Amin'izao fotoana izao dia mandamina daty voalohany fotsiny ianao, koa raiso tsikelikely izany ary ankafizo.
Raha mitazona kely ianao dia ho hitanao ihany koa ny fahalianan'izy ireo aminao.
Raha ny fandefasan-kafatrao azy ireo foana dia manome soso-kevitra izany fa mihoatra noho izy ireo ianao. Tsy olana izany fa zavatra tokony ho fantatra fotsiny.
Raha efa mahatsapa ianao fa ‘manelingelina’ azy ireo na toa tsy dia tia miresaka izy ireo dia azonao atao ny mieritreritra indray ny manontany azy ireo.
Mety tsy dia dodona ny hihaona izy ireo, na mety tsy ho eo amin'ny sehatr'asa mitovy aminao izy ireo. Na izany na tsy izany dia manampy foana ny mahita ny zavatra tsapan'ilay olona hafa alohan'ny hamoahanao ny tenanao any.
4. Ataovy marina izany.
Mijanòna ho ianao ihany! Araka ny efa noresahintsika tetsy ambony, ny hoe sariaka sy adala dia mandeha lavitra amin'ny resaka fahafantarana olona iray amin'ny dingana voalohany.
Raha mamaky an'io fizarana io anefa ianao ary mikorontan-tsaina avy hatrany, dia tazomy ho anao irery hatrany izany ary miorena.
Raha tsy extrovert be tampoka ianao dia aza mody atao. Mbola azonao avela hamirapiratra amin'ny fombanao manokana ny toetranao mahafinaritra - jereo ireto ohatra eto ambany ireto…
Ataovy marina ihany koa ny resaka. Mety halaim-panahy ny hahatonga ny tenanao ho toa olon-kafa noho ny lahatsoratra (angamba milaza amin'izy ireo fa mpanatanjaka gym ianao na vao avy nanamboatra tafiotra ianao, na dia tsy marina aza ireo zavatra ireo!), Saingy tsy misy teboka
Amin'ny fanehoana kinova sandoka ny tenanao dia tsy avelanao hahita ilay olona hafa hoe iza marina ianao! Hivoaka ihany izy rehetra amin'ny farany ary hiafara amin'ny fanontaniany hoe maninona ianao no nandainga.
Faka tahaka ianao, tazomy ilay mampamangy maivana! Rehefa maniry olona iray ianao dia mora ny fahazarana milaza matetika azy ireo hoe manintona izy ireo na tianao ny fomba fanaovany azy, ohatra.
Mamy izany ary mahafinaritra foana ny mampisy olona mahatsapa tena momba ny tenany, fa hanomboka haingana kosa ny fahatsapany fa sandoka sy hafahafa - na dia fatra-piavonavona aza.
Arotsaho isaky ny matetika ny tsipika mahafinaritra maromaro, fa aza mihoatra ny rano ary mampatahotra azy ireo alohan'ny nanararaotanao nahafantatra azy ireo akory.
Ho tsapan'izy ireo fa tianao izy ireo rehefa miresaka aminy ianao ary manontany azy ireo - ny ambiny dia afaka manaraka avy eo.
5. Manana drafitra ao an-tsaina.
Tsy mila mandefa an-tsarintany isa-minitra amin'ny daty ianao, fa ny fananana zavatra ao an-tsaina dia hevitra tsara.
Azonao atao ny manoro hevitra ny mandeha any amin'ny fisotroana fantatrao fa tian'izy ireo, na afaka manao fikarohana ianao ary mahita gig gig na pub quiz ohatra, ohatra.
Misy olona manontany anao mahafinaritra, fa misy olona mikasa ny zavatra heveriny ho tianao dia mbola tsara kokoa!
Ampahafantaro azy ireo fa te handray ianao azy ireo amin'ny daty, noho izany dia ampifanaraho amin'ny zavatra heverinao fa tena hankafizin'izy ireo.
Raha tsy misotro izy ireo, ohatra, alao antoka fa manome soso-kevitra ianao any ho any izay manompo kafe na zava-pisotro malefaka! Raha tia zavakanto izy ireo dia anontanio izy ireo amin'ny datin'ny galeriany.
Aza adino - na eo aza ny stereotype, tsy ny tovovavy ihany no te ho voahaja! Asehoy fa miahy ianao ary tianao izy ireo hanana fotoana mahafinaritra miaraka aminao ary manomana zavatra mahafinaritra hizara amin'izy ireo.
Ho tiany ny zava-misy izay nieritreretanao azy io ary hahatsapa tena manokana.
Lahatsoratra 12 santionany hanaovana anao manokana
Ho an'ny olona efa fantatrao:
Azonao atao ny somary sahy sy tsy miraharaha.
1. Hey, nahafinaritra anao ve ny nahita anao taloha - maniry hisotro zava-pisotro amin'ity herinandro ity?
2. Hey olon-tsy fantatra, efa elaela izay! Kafe ary hahatratra tsy ho ela?
3. Maniry mafy ilay burger nananako tamin'ny volana lasa aho - maniry hiaraka amiko mandritra ny iray alina izao?
Ho an'ny daty fampiharana mampiaraka:
Raha sambany ianao mivory amin'ny daty.
1. Hey, tena faly aho mahafantatra anao - te haka kafe tsy ho ela?
2. Mahafinaritra be ny miresaka aminao, te hihaona mivantana! Malalaka ve ianao hisotro rano amin'ity herinandro ity?
3. Tena tsara ve ny mihaona ary mahita raha mifanatrika tsara an'io amin'ny tena isika Rehefa tsara ho anao amin'ity herinandro ity?
Raha te handrefesana ny vibe ianao:
Ataovy misokatra hatrany ny raharaha ary manomeza drafitra ankapobeny fa tsy fotoana sy daty voafaritra.
1. Afaka misotro kely ve ianao mandritra ity herinandro ity?
2. Nanontany tena ve ianao raha te hisambotra sarimihetsika indraindray? Halaiko ny popcorn
3. Te-hivoaka aho indraindray - misafidy ny fotoana ianao ary hofidiko ilay toerana!
Ho an'ireo sahy:
Ataovy amin'ny tananao ny fonao ary tadiavo izany.
1. Te hahita anao hisotro avy eo ve aho raha maniry azy io? #DateNight<3
2. Mila manana plus-iray aho amin'ny fiaraha-misakafo am-pitiavana amin'ity faran'ny herinandro ity - tianao ve izany?
3. Azoko atao ve ny misotro anao amin'ity zoma ity? Tonga amiko ny fihodinana voalohany…
Noho izany, efa nomaninao ny fombanao ary efa namboarinao ny lahatsoratrao.
Vantany vao tonga ny mandefa, dia mahareta. Mety halaim-panahy tokoa ny mandefa hafatra indray raha tsy mahazo valiny eo no ho eo ianao - aza atao izany!
Mety te-hieritreritra ny zavatra tsapany momba ny fanaovana sipa izy ireo, mety ho tsy niambina azy ireo izany (raha fantatrao vetivety izy ireo dia mety ho gaga izy ireo!), Na mety tsy eo amin'ny telefaonin'izy ireo fotsiny ilay segondra marina nandefasanao SMS izy ireo.
Omeo fotoana kely izy ireo hiverina aminao. Aza mandefa lahatsoratra hafa miteny toy ny hoe 'Na tsia, miankina aminao tanteraka izany, tsy misy ahiahy raha tsy tsapanao izany, azoko tanteraka, tsy misy fihenjanana mihitsy, ampahafantaro fotsiny ahy!'
Toa tsy 'mora tsio-drivotra' araka ny eritreretinao izy ireo ary ho very hevitra izy ireo raha tena te hahita azy ireo mihitsy ianao na tsia!
Andraso izany, atsaharo ny mijery ny telefaoninao ary jereo izay mitranga.
Ka hoy izy ireo eny…
Mifalia, manana daty miaraka amina lehilahy tena tianao ianao!
Tohizo fa mandeha tsara ny vibe tsara, manohiza mifampiresaka sy mifalifaly amin'izy ireo ary mandefasa hafatra isan'andro iray na mihoatra alohan'ny daty hampahafantarana azy ireo fa manantena ny hahita azy ireo ianao.
Aza asiana tsindry be loatra amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny fandefasana hafatra an-tsoratra maharitra mba hanamafisana na hanamarinana fa tsy nanova ny heviny izy ireo. Ekeo fotsiny fa nilaza izy ireo fa eny ary hanana fotoana mahafinaritra miaraka ianareo.
Ka hoy izy ireo tsia…
Raha manapa-kevitra izy ireo fa tsy maniry ny hanao sipa dia tsy maninona. Maharary ary mety mahatsiaro ho somary somary somary somary somary somary somary somary somary somary somary somary somary somary tsy nahatsiaro tena ihany ianao, saingy milamina ihany.
Mety ho noho ny antony maro - mety mahita olon-kafa izy ireo, mety ho ratsy ny fotoana, na mety tsy hahatsapa toa anao koa izy ireo.
Ny zava-dehibe dia ny fametrahanao ny tenanao any ivelany sy fanandramanao.
Aza manao ny tsy rariny ary mandefasa lahatsoratra mihetsika mahery setra miverina! Rehefa mahatsapa isika fa nolavina dia afaka mamaky kely isika ary mety hahazo dikany kely akory.
Kosa, esory izany ary mandrosoa. Valio milaza fa azonao sy ankafizinao ny fahamarinan'izy ireo.
Tsy fantatrao mihitsy, ny fahitanao ny fomba nitantananao azy ireo handà daty iray dia mety hahatonga azy ireo ho liana kokoa aminao!
Toa hadalana izany, fa mampiseho ny maha-matotra sy mamy anao, ary hananan'izy ireo izany ho fahatsiarovana na ianao fa tsy olona mandefa lahatsoratra ratsy rehefa nolavina izy ireo!
Na izany aza dia manapa-kevitra ny handeha hangataka amin'ny lehilahy amin'ny text ianao, tadidio - ho tenanao, asehoy fa miahy ianao ary aza matahotra ny hametraka ny tenanao any!
Mbola tsy azonao antoka izay holazaina ao amin'ny lahatsoratrao amin'ity lehilahy ity? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
Ahoana ny fomba ilazana amin'ny olona tianao azy nefa tsy ampiakarinao: toro-hevitra 11 voaporofo!
Ahoana no fomba hiarahabana bandy bandy: toro-hevitra tsy misy Bullsh * t 15
ny fomba hamerenako ny vadiko amin'ny vehivavy hafa
firy taona ilay mpikarakara sy lehilahy
wwe brock lesner hira ry zareo
rahoviana i ronda rousey no manaraka ufc miady
azonao fitiavana sy filan'ny tamin'izany andro izany
tsy mahatsapa faniriana amin'ny fifandraisana
naninona no nijanona ny hatsiaka vato